मौद्रिक नीति पुनर्कर्जा व्यवस्थापन र रोजगारीमा केन्द्रित हुनुपर्छ «
प्रकाशित मिति : असार २९, २०७७ सोमबार
–पुनर्कर्जा व्यवस्थापन र रोजगारी सिर्जनामा ध्यान दिएर मौद्रिक नीति ल्याउँछौं– डा. गुणाकर भट्ट, प्रवक्ता नेपाल राष्ट्र बैंक
–अबको तरलता व्यवस्थापनका लागि मौद्रिक नीतिले भूमिका खेल्नुपर्छ
शेखर गोल्छा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेउवमहासंघ
–मौद्रिक नीति क्षणिक अवस्थालाई भन्दापनि दीर्घकालीन अवस्था हेरेर आउनुपर्छ
ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, पूर्वअध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स एशोसिएन
–आम व्यवसायीका लागि मौद्रिक नीतिमा ब्याजदरको कुरा सम्बोधन हुनुपर्छ
राजेन्द्र मल्ल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले कोभिड–१९ का कारण प्रभावित निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्दै पुनर्कर्जा व्यवस्थापन र रोजगारी सिर्जनामा ध्यान दिएर मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको बताएका छन् ।
आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा प्रवक्ता भट्टले सबै क्षेत्रका विज्ञहरुको सुझाव लिने काम भइसकेको जनाए । “सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्नेगरी नै मौद्रिक नीति आउँछ, यसले सबै क्षेत्रको सुझावहरु समेट्ने कोसिस गरेको छ ।”
कोभिड–१९ कारण आर्थिक वृद्धिदरको गतिमा ब्रेक लागेको र आपूर्ति श्रृंखलासमेत अवरुद्ध भइरहेको परिस्थिति सुनाउँदै उनले अब आउने मौद्रिक नीतिले आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने विश्वास दिलाए । उनले भने, “मौद्रिक नीतिमा आर्थिक पुनरुत्थानमै जोड छ । अधिकतम लचिलो नीति ल्याउनेगरी हामी छलफलमा छौं ।”
मौद्रिक नीतिले कोभिडबाट प्रभावित क्षेत्रलाई चाँडो सञ्चालन गर्न मद्दत पु¥याउने, वित्तीय साधनलाई प्राथमिकीकरण गर्ने, डिजिटलाइजेशनमा जोड दिइने, संस्थागत सुशासनमा जोड दिइने उनले बताए । अहिलेको आर्थिक संकटबाट बचाउनका लागि मौद्रिक नीतिले आधार दिने उनको भनाई छ । बैंकहरुको कर्जा प्रवाह हुन नसकेका कारण बजारमा तरलता अधिक रहेको साथै बजेटमै व्यवस्था गरिएको पुनर्कर्जा कोषको सही परिचालन र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि पनि मौद्रिक नीतिकेन्द्रित हुने उनले स्पष्ट पारे ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले यो वर्षको मौद्रिक नीति बजेटजत्तिकै महत्वपूर्ण भएकोले सबैको यसमा चासो रहेकोले सबै क्षेत्रलाई राहत मिल्नेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा जोड दिए ।
मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न र निजी क्षेत्रलाई समेत माथि उकास्नका लागि मौद्रिक नीति व्यवहारिक आउनेमा आफू आशावादी रहेको गोल्छाको भनाई छ । उनले कोभिड–१९ का कारण स्वदेशमा झण्डै पाँच लाख युवाहरु विस्थापित भएको र सोभन्दा ठूलो संख्यामा विस्थापित भई बाहिरबाट युवाहरु आउने रहेको बताउँदै उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न चुनौती रहेको बताए । “यो चुनौतीलाई पनि सम्बोधन गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ ।” उनले भने ।
उनले अबको तरलताको व्यवस्थापनका लागि मुख्य आशा नै मौद्रिक नीति रहेको बताए । मौद्रिक नीतिले मुख्यतः पुनर्कर्जा, ब्याजदर र पुनसंरचनालाई जोड दिनुपर्ने बताए । उनले भने, “पुनर्कर्जाको पहिलाको स्वरुप फेर्नुपर्छ ।’ गोल्छाले आगामी मौद्रिक नीतिमा तरलता व्यवस्थापन र श्रमिक व्यवस्थापनका लागि विशेष ध्यान दिइनुपर्ने सुझाव दिए । व्याजलाई पुँजीकृत गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । उनले भने, “त्यही धितोमा २० प्रतिशत एक्स्ट्रा क्रेडिट दिनुपर्छ ।”
उनले यो वर्ष पैसा कमाउने वर्ष नभएको भन्दै सबैले सर्भाइभ हुनेगरी नीति आउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “हामी उठ्न सक्छौं । राष्ट्र बैंकले अलिकति सहयोग गर्नुपर्छ । अहिले सबैले आफ्नो प्रोफिट छोडेर अर्थतन्त्रलाई जोगाउने काम गरौं । यसो गरियो भने समस्याको निदान हुन्छ ।”
उनले यसअघि पुनर्कर्जा ठूला व्यवसायीलाई मात्रै दिइने गरिएको सुनाउँदै यो वर्ष ‘स्टिमुलेशन प्याकेज’ आउनुपर्ने र यसबाट साना, मझौला र ठूला सबैले लाभ लिनुपर्ने बताए ।
नेपाल बैंकर्स एशोसिएनका पूर्व अध्यक्ष तथा नेपाल बंगलादेश बैंकका सिईओ ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले यो वर्षको बजेटमा आम जनताले अधिकतम राहतको आशा राखेको भएपनि केही राहत आएको तर जनताका अपेक्षा पूरा नभएको स्पष्ट पारे । अहिले सम्पूर्ण क्षेत्रको ध्यान नेपाल राष्ट्र बैंकतर्फ रहेको उनले सुनाए । उनले भने, “म यो मौद्रिक नीतिमा धेरै अपेक्षा राख्दिन् । यसले कोभिड–१९ र बाढी, पहिरोले पारेको समस्यालाई पक्कै सम्बोधन गर्नेछ ।”
बैंकको ब्याजदर कम गर्नलाई आफूहरु प्रयासरत रहेको पनि उनको भनाई छ । उनले भने, “१५÷१६ प्रतिशतको ब्याजदरलाई १२ प्रतिशतमा ल्याऔं । हामी यसलाई सिंगल डिजिटमा ल्याउने कोशिष गर्दैछौं ।” उनले राज्यले अति प्रभावित क्षेत्रलाई सुविधा दिनुपर्नेमा जोड दिए । “अहिले बाँच्ने र बचाउने बेला हो । मौद्रिक नीति क्षणिक अवस्थालाई भन्दापनि दीर्घकालिन अवस्था हेरेर आउनुपर्छ ।” उनले भने ।
उनले उद्योगी, व्यवसायी, व्यापारी, बैंकर्सलगायत सबै क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले केही अपेक्षा गर्नु स्वभाविक भएपनि मौद्रिक नीतिका केही आफ्नै सीमाहरु हुने तर्क गरे । कोभिडबाट सबैभन्दा बढी, मध्यम र कम प्रभावित गरी ३ भागमा वर्गिकरण गरेर ऋणको किस्ता तिर्ने विषयमा केही न केही समय थप हुने उनले विश्वास दिलाए ।
उनले भने, “कर्जाको ब्याजदर घटाउँदा निक्षेपको ब्याजदर पनि घटाउनु नै पर्नेहुन्छ । यसरी बैंकहरुले कर्जाको ब्याजदर घटाउँदा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई नै नकारात्मक असर गर्छ ।”
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले अहिले राष्ट्र विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेकोले राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति विगतभन्दा फरक आउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपालको अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी र निर्यातमुखी बन्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले १५० अर्बको ‘स्टिमुलस प्याकेज’ लागू हुनुपर्ने पनि बताए । उनले भने, “यो बजेटमा घोषणा भएको छ । तर, कार्यान्वयन भएको छैन् । अब आउने मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्छ होला । मौद्रिक नीति असारमै आउनुपर्दथ्यो ।”
उनले आम व्यवसायीको लागि मौद्रिक नीतिमा ब्याजदरको कुरा सम्बोधन हुनुपर्ने बताए । उनले अहिले राष्ट्र नै विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेकोले समग्र क्षेत्र एक भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “एकले अर्कोलाई सहयोग गर्नुपर्छ । अब आउने मौद्रिक नीतिले तल्लो तहसम्म यसको अनुभुति हुन सकोस ।” उनले सरकारी र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढे अहिलेको संकटबाट पार पाउन सकिने बताए ।
“हाम्रो देशमा काम गर्ने शक्ति एशियामै बढी भएको देश हो । सबै एक भएर अघि बढ्नुपर्छ । सरकारले ल्याउने मौद्रिक नीति तल्लो तहका जनताले महशुस गर्न सक्नुपर्छ ।” उनले भने ।
असार १ मा सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती र मेलम्ची नदीमा एकै साथ आएको बाढीले ग्राउण्ड जिरोमा झारेको
जेठमै पूरा भयो नेपालगन्ज भन्सारको लक्ष्य
नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयको चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य जेठ महिनामै पूरा भएको छ । कार्यालयले चालू
दूध बिक्री नभएपछि पर्वतका कृषक चिन्तित
पर्वतको फलेवास नगरपालिकाका किसान दूध बिक्री नहुँदा मर्कामा परेका छन् । लामो समयको निषेधाज्ञाका कारण
सुदूरपश्चिम स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण घट्दो
अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐनको व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने रकम सुदूरपश्चिममा
कर्णाली प्रदेशको खर्च ११ महिनामा एक चौथाई मात्र
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना मात्र बाँकी छँदा विनियोजित जम्मा बजेटको
कर छुट दिने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय
काठमाडौं महानगरपालिकाले कोरोनाको महामारीबाट प्रभावित करदातालाई विशेष कर छुट दिने भएको छ । बिहीबार काठमाडौं